MINISTRY of FOREIGN AFFAIR – Just another WordPress site
President U Htin Kyaw accepts credentials of the Ambassador of the Argentine Republic
President accepts credentials of the Ambassador of the Republic of Cuba
State Counsellor honours 70th anniversary of Myanmar-Russia diplomatic relations
UEHRD Vice Chairman Dr Win Myat Aye presents document of honour for donations to Union Minister U Kyaw Tin
Union Minister U Kyaw Tin poses foradocumentary photo together with Foreign Ministers at the 3rd Mekong - Lancang Cooperation Foreign Ministers' Meeting held in Dali, Yunnan Province, China
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi is welcomed by Chinese President Xi Jinping in Beijing, China
Group photo session of 13th ASEM FMs' Meeting
State Counsellor H.E Daw Aung San Suu Kyi holds talks with H.E Mr. Wang Yi, Minister for Foreign Affairs of the People's Republic of China
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi holds talks with Hon. Rex Tillerson, US Secretary of State
Participants of the ASEM SOM Meeting have the documentary photo taken in Nay Pyi Taw on 17 November 2017
13th ASEM Foreign Ministers' Meeting (20-21, November, 2017, Nay Pyi Taw)
Invitation Bid for E-mail Security and Maintenance
Messages of felicitations were exchanged on the occasion of the Seventieth Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of the Union of Myanmar and the Russian Federation
Myanmar Permanent Representative to the United Nations deliveredaStatement at Security Council on Government’s efforts in Rakhine State
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of Bangladesh to the Republic of the Union of Myanmar
February 21, 2018H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein, the newly-accredited Ambassador of the Argentine Republic to the Republic of the Union of Myanmar, presented her Letter of Credence to U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, at Presidential Palace, Nay Pyi Taw at 3:05 pm yesterday. Present on the occasion were Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin and Director-General U Thant Sin of the Protocol Department. Naypyitaw, February 21, 2018 နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ၎င်း၏ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာပေးအပ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်သဘောတူညီပြီးဖြစ်သော သံအမတ်ကြီး မစ္စ မာရီယာ အလစ်ရှာ ကာ့ဇိုနီ ဒီ ဆွန်ချိုင်းန် သည် ညနေ ၃ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော်၌ ၎င်း၏ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာကို ပေးအပ်သည်။ အဆိုပါ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်စင်တို့ တက်ရောက်ကြသည်။ နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁...
February 21, 2018H.E. Mr. Hector Conde Almeida, the newly-accredited Ambassador of the Republic of Cuba to the Republic of the Union of Myanmar, presented his Letter of Credence to U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, at Presidential Palace, Nay Pyi Taw at 2:30 pm yesterday. Present on the occasion were Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin and Director-General U Thant Sin of the Protocol Department. Naypyitaw, February 21, 2018 နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ၎င်း၏ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာပေးအပ် နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန်သဘောတူညီပြီးဖြစ်သော သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဟက်တာ ကော်န်ဒီ အယ်လ်မေးဒါးသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော်၌ ၎င်း၏သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာကို ပေးအပ်သည်။ အဆိုပါ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်စင်တို့ တက်ရောက်ကြသည်။ ...
February 20, 2018State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi attendedadinner honoring the 70th Anniversary of Myanmar-Russia diplomatic relations held in the Kempinski Hotel in Nay Pyi Taw yesterday. First of all the State Counsellor viewed the exhibition of photos shown on the occasion of the 70th anniversary of Myanmar-Russia diplomatic relations. The dinner honoring the 70th anniversary of Myanmar-Russia diplomatic relations commenced with the playing of the national anthems of the two countries, after which the Russian Ambassador to Myanmar H.E Dr. Nikolay Listopadov deliveredamessage of greetings and State Counsellor Daw Aung San Su Kyi deliveredashort speech to honour the occasion. After the dinner, State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi was entertained by Russian folk music artists and the musical band “Ngwe Yaung Turiya Kyo Myar”, to which she presentedagift ofafloral basket. Mr. Anatoly Bulachnikov, the Vice-Chairman of the Russia-Myanmar Association for Friendship and Cooperation (RMAFC), and RMAFC member Mr. Rudolf Yanson presented Daw Aung San Suu Kyi with gifts and then took commemorative photos. The event was attended by Union Election Commission Chairman U Hla Thein, Union Ministers U Kyaw Tint Swe, Dr. Pe Myint, Dr. Than Myint, U Han Zaw and U Kyaw Tin, Union Civil Service Board Chairman Dr. Win Thein, Chief of General Staff (Army, Navy and Airforce) General Mya Tun Oo, Deputy Ministers U Aung Hla Tun, U Win Maw Tun, U Maung Maung Win, high ranking Tatmadaw officers, invited guests and officials. Ref: The Global New Light of Myanmar February 20, 2018 နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာ- ရုရှား သံတမန် ဆက်ဆံရေး ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် မြန်မာ-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ညစာ စားပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ ၆ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ချီးမြှင့်သည်။ ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မြန်မာ-ရုရှား သံတမန် ဆက်ဆံရေး နှစ်(၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ခင်းကျင်း ပြသထားသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။ ထို့နောက် မြန်မာ-ရုရှား သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ်(၇၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲကို မြန်မာ-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော် သီချင်းများဖြင့် အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်သည်။ ယင်းနောက် မြန်မာနိ်ုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E.Dr. Nikolay Lisdopadov က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြား ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂုဏ်ပြုအမှာစကား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ရုရှား-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Anatoly Bulachnikov နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့ဝင် Mr.Rudolf Yanson တို့က နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် ပေးအပ်ပြီး မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ ညစာသုံးဆောင်သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရုရှားရိုးရာ ကျေးလက်ဂီတ အနုပညာရှင်များနှင့် “ငွေရောင်တူရိယာကြိုးများ” ဂီတတူရိယာအဖွဲ့တို့၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကို အားပေးကြည့်ရှုပြီး ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်း ပေးအပ်သည်။ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဦးဟန်ဇော်နှင့် ဦးကျော်တင်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်း၊ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်း၊ ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ Ref: MOI Webportal Myanmar February 20, 2018...
H.E. U Han Thu Presents Credentials to President of Sri Lanka
January 30, 2018U Han Thu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, presented his Credentials to His Excellency Mr. Maithripala Sirisena, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on 23 January 2018, in Colombo. Ministry of Foreign Affairs Nay Pyi Taw Dated. 30 January 2018 သံအမတ်ကြီး ဦးဟန်သူ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ် သီရိလင်္ကာဒီမိုကရက်တစ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးဟန်သူသည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကိုလံဘိုမြို့၌ သီရိလင်္ကာ ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ မိုင်သရီပါလ ဆီရီစီနာထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နေ ပြည် တော် ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်...
H.E. U Lwin Oo Presents Credentials to President of Bangladesh
January 16, 2018U Lwin Oo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the People’s Republic of Bangladesh, presented his Credentials to His Excellency Mr. Md. Abdul Hamid, President of the People’s Republic of Bangladesh on9January 2018, in Dhaka. Ministry of Foreign Affairs Nay Pyi Taw Dated. 16 January 2018 သံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦးသည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဒါကာမြို့၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ မိုဟာမက် အဗ္ဗဒူလ် ဟာမစ်ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နေ ပြည် တော် ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်...
H.E. U Moe Kyaw Aung Presents Credentials to President of India
December 28, 2017U Moe Kyaw Aung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of India, presented his Credentials to His Excellency Mr. Ram Nath Kovind, President of the Republic of India on 22 December 2017, in New Delhi. Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw Dated. 28 December 2017 သံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်သည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် နယူးဒေလီမြို့၌ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာ ရမ်နက်သ် ကိုဗင့်ဒ် ထံပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နေ ပြည် တော် ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၂၈ ရက်...
Myanmar Embassy Websites ME, BANDAR SERI BEGAWANME, BANGKOKME, BEIJINGME, BELGRADE
Consular Services in Embassies